Ụbọchị My Pet » 5 Atụmatụ Iji Mee A Great mbụ Online dịwara echiche
emelitere ikpeazụ: Jan. 21 2021 | 3 min agụ
Mgbe ndị mmadụ na-ekwu okwu banyere mbụ amụta, ha ozugbo na-eche ihu na-ahụ ihu na kọntaktị. Otú ọ dị, ugboro gbanwere, na mbụ amụta na-okwu budata na online kọntaktị ... karịsịa mgbe ọ na-abịa online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Na, iwu maka ihu na ihu mbụ amụta si dị iche na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị mbụ amụta.
Ebe gị mbụ echiche mkpa: Profaịlụ gị na gị Email
Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị n'elu omenala ụzọ nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, ihe mbụ ị ga-aghọta na ọ bụ ebe gị na mbụ amụta na-aga ihe. Na, gị na mbụ amụta na-aga n'ebe a na ma gị na profaịlụ ma email.
Mgbe Ọ na-abịakwute gị Profaịlụ:
Ọ bụrụ na ị na-adịghị ama, profaịlụ gị kwesịrị na-nti na upbeat - ihe ọ bụla na-egosi na ị na-owu na-ama ma ọ bụ olileanya (isi n'aka-apụ n'ihi na ndị inyom). Ị na-chọrọ iji hụ ya anọgide ugbu a, otú imelite ya mgbe bụrụ na ị chọrọ (ma ọ bụ mgbe ihe agbanweela ná ndụ gị). Jide n'aka na ị na-akọwa banyere iche iche nke ihe ndị ị na-achọ ime na-enweghị na-enye ihe ọmụma dị ukwuu nri kwụsịrị ụsụ. Cheta, na ị chọrọ jide mmasị ha mgbe ị na-kpaliri azụ na-apụta.
Mgbe Ọ na-abịakwute gị Email:
Ugbu a, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na emailing a nwere "ụbọchị", mkpa ka ị mara otú dee a na-egbu mbụ echiche email. Na mbụ email gị zipu ga-ọkụ ahụ na ịgwa; ị na-achọ na-egosi na onye nnata na ị na-akpali ma na ha kwesịrị ga-esi mara na ị. Ya mere, ihe kwesịrị na mbụ echiche email abuana?
1 - Gị Email ekele
Mgbe ị na-ahụ profaịlụ nke onye na-amasị gị na-ekpebi na ị chọrọ kpaliri ha, mkpa ka ị mara ihe na-asị ka a oké mbụ echiche. Ị kwesịrị ị na-amalite na email oyi na-esonụ, "Ezi ụbọchị ma ọ bụ mgbede ma ọ bụ Ndewo (aha njirimara)". Jide n'aka na ihe onye ahụ na aha njirimara na-n'ụzọ ziri ezi spelt - dee ya ala ma ọ bụrụ na ị na-. Nke a na ụdị oghere abịa gafee dị ka ọkụ na N'ụda.
Mgbe ọ na-abịa na-ede nke zuru okè mbụ echiche email, Otu aro bụ mkpa ka ị na-n'uche: ọ dịghị ihe karịrị atọ na paragraf a, na ọbụna paragraf abụọ. Ihe ọ bụla na ọ bụ ọnyà na-agaghị enweta gị anata, na ihe ọ bụla kwa ogologo pụtara na ị na-agbalị abịa gafee dị ka sikwara ike njite.
3 - Chọta Common Ground
Mgbe ị na-ese n'elu ha profaịlụ, Obi abụọ adịghị ya na i nwere ihe jikọrọ otú banyere ya na email. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe onye iberibe na ị ma na-ekere òkè nkịtị, na-agwa ha banyere ya. Ezie na ọtụtụ folks ga lelee profaịlụ gị mgbe ha na-enweta ihe email gị (na ee, profaịlụ gị kwesịrị banyere-amasị gị na omume ntụrụndụ), ị kwesịrị ị na ọ bụghị mgbe niile ịgụ na a.
4 - Kwuo Profaịlụ-Specific Ihe
Site ugbu a ị na-arahụ n'elu ha profaịlụ ọma, n'ihi ya, mgbe ị na-amalite na-ede gị email, banyere ihe kpọmkwem banyere ya. Tụlee ekwu okwu banyere ebe ha na na ma ọ bụ a nkiri ha na hụrụ, wdg. na-nti banyere isiokwu. Ọ dị mkpa na ị ga-abịa dị ka ndị a mma mmadụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ ha iji zaghachi azụ.
5 - Jụọ One (Naanị Otu) Direct Ajụjụ
Ọ bụ ihe kasị mma na-ajụ nnọọ otu kpọmkwem ajụjụ otú ị ga-esi zaghachi azụ. Ọtụtụ ajụjụ nwere ike na-aghọta dị ka ndị nnyocha. Jide n'aka na ajụjụ bụ ihe ha na-adịghị cheta ịza.
Ọ dị mkpa ị na-echeta na ike a mbụ echiche, ma profaịlụ gị na email mkpa ka anya ịkpọ - na-aga ha ma na a ezi nha nha mbo, achọ mkpoputa na asụsụ emehie. -Eme ihe n'eziokwu na ha abụọ, na mgbe ị na ide na mbụ email, arapara ozi izugbe - onye ị bụ, afọ gị, ọ bụrụ na ị bụ di na nwunye, nwere ụmụaka, wdg.
Mbụ amụta bụghị nanị n'ihi na ihu na-ahụ ihu na kọntaktị ọzọ; ha na-na-eji online. Mụ na ụfọdụ ndị ibu ụzọ chebara, ị nwere ike ịmepụta mbụ echiche na ọkọkpọhi anata ị na-achọ.
Top US Cities maka Single Women
5 Atụmatụ na-adị ndụ anya Mmekọrịta – Mmụta Edition
3 Nzuzo ka dịwara na a Mmụta chekwara